Imifanekiso eqokelelweyo yesitokhwe kunye neeVidiyo zeSiza seVidiyo
I-B-roll, i-stock footage, iindaba zeendaba, umculo, iividiyo zangasemva, utshintsho, iitshathi, iitshathi ze3D, iividiyo ze3D, iitemplate zevidiyo infographic, iziphumo zesandi, iziphumo zevidiyo, kunye neetemplate zevidiyo ezipheleleyo zevidiyo yakho elandelayo zinokuthengwa kwi-Intanethi. Njengoko ujonge ukulungelelanisa ukukhula kwevidiyo yakho, ezi phakheji zinokukhawulezisa imveliso yakho yevidiyo kwaye zenze iividiyo zakho zibukeke ziingcali ngakumbi kwixesha elincinci.
Ukuba ubuchwephesha bobuchwephesha, unokuba unqwenela ukuntywila uye kuthenga imifanekiso ethile. Ezinye zeemiboniso, umzekelo, ziza nemiyalelo emangalisayo yendlela yokuhlela ividiyo, ukuyitshintsha, iilogo, ukutshintsha isicatshulwa, njl.njl.
Nanku umzekelo omkhulu. Jonga oku Ipakethi emhlophe emhlophe evela kwiVidiyo -Ungazisebenzisa zonke izigcawu esele ziphuhlisiwe ukubeka ividiyo yakho echazayo!
Okanye unokufuna ukukhupha ividiyo entle kwiZiphumo emva kwesicelo sakho esitsha se-iPhone. Thenga ngokulula i Ikhathalogu ye-iPhone evela kwiBlueFX kwaye uhambe!
Kukho iisayithi ezimbalwa onokuzisebenzisa eziza kukhangela ngaphezulu kweendawo ezingama-50 zesitokhwe kwi-Intanethi yonke. Phuma Ukubhityana.net.
Iindawo zeVidiyo zeStock
Nalu uluhlu lwezixhobo ezifanelekileyo zokufumana ividiyo yasimahla yesitokhwe sevidiyo yeprojekthi yakho elandelayo. Indawo endiyisebenzisa kakhulu ngenxa yeendidi zayo ezahlukeneyo kwaye iindleko eziphantsi zezi Depositphotos. Ukuba ukhangela ngevidiyo kwicandelo lokukhangela, iziphumo ziya kuba yividiyo. Okanye, unokukhetha ividiyo ekukhupheleni kwabo ezantsi.
123RF -Imifanekiso eqingqiweyo yeHD kunye neevidiyo
I-Adobe stock -Zisa ezona zimvo zakho zibalaseleyo ebomini kunye neyona nto ibalaseleyo kwisitokhwe.
Ubudala Fotostock - Iiklip zevidiyo ezikhululekileyo nezilawulwayo zamalungelo
Alamy Imifanekiso engaphezulu kwesigidi se-55, imifanekiso kunye nevidiyo
Clipcanvas.com -Umrhumo welayisensi yexesha elinye, Ukusetyenziswa okungapheliyo, kwihlabathi liphela, nayiphi na imidiya, nayiphi na iFomathi, ukhuphelo oluninzi
Ukuhamba kweCorbis -Umxholo ophezulu wokudala kunye nomxholo wokuhlela ohlaziywa rhoqo
Depositphotos -Umxhasi we Martech Zone!
Idijithali Iziphumo zevidiyo kunye nokukhuphela imifanekiso.
Nyibilikisa -Imifanekiso yeHD yomntu obalisa ibali lanamhlanje
iStockphoto -Khangela ividiyo yesitokhwe
IziPhumo zoMbane -Imifanekiso eshukumayo yaseAsia kunye neopopayi
MovieTools usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows -Izinto ezipheleleyo simahla zoopopayi be-2D kunye ne-3D, ezantsi kwisithathu nangaphezulu
IiPlixs -Khangela amawaka emifanekiso esemgangathweni yasimahla kunye neevidiyo ezinelayisensi yeCC0.
Pond5 - indawo yentengiso yemithombo yeendaba
Uhlaziyo - ividiyo efikelelekayo yesitokhwe, emva kweprojekthi, umculo kunye nezandi
Shutterstock -Iividiyo zesitokhwe ezingenasimahla
Imifanekiso eqingqiweyo -Imifanekiso ekumgangatho ophezulu yemifanekiso esimahla kunye nelayisensi elawulwa ngamalungelo. Imifanekiso ye-Ultra HD iyafumaneka ukukhuphela kwi-1080p.
Ibali -Izixhobo ezisekwe kubhaliso zokukhuphela imifanekiso yempahla yasimahla yasebukhosini, imvelaphi yokuhamba, emva kweempembelelo zeetemplate kunye nokunye.
IVivihi Iifayile zevidiyo zasimahla
bedlala -Ikhethekileyo, ividiyo yasimahla yesitokhwe, ekhethwe ngesandla ngabahleli beVimeo.
Iividiyo zeYayImage - Ngaphezulu kwama-250,000 HD kunye nevidiyo yevidiyo ezi-4 ezinamaxabiso afikelelekayo.
Kwaye ukuba ungathanda imiboniso bhanyabhanya yakudala, jonga Oovimba be-Intanethi be-Intanethi!
Qaphela: Sinezinto ezinxulumene nazo kule post!
tags: 123RFzodakaisitokhwe se-adobeemva kwemiphumoemva kweempembelelo zeetemplateUbudala Fotostockuxolonayiphi na iFomathiNaliphi na imidiyaUkuqengqelekaIgalari yeMotion ye-BBCibluefxIiklipcanvasUkuhamba kweCorbisIdijithaliNyibilikisavideoUkukhangela imifanekisoFramepoolImifanekiso eqingqiweyo yasimahlaukufumanaiMovieOovimba be-Intanethi be-IntanethiyifotoIiVidiyo zeNtengisoimvelaphi yokuhambaizinto ezishukumayoMovieTools usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindowsukhuphelo oluninziUmrhumo welayisensi yexesha elinyeUkusetyenziswa okungapheliyoPond5Uhlaziyoamalungeloubukumkani abukhululekangaShutterstockisitokhwe oopopayiImifanekiso eqingqiweyoisitokhwe sevidiyoIsitayile sevidiyoiibhloko zebaliutshintshoIibhloko zeVidiyoIziphumo zevidiyoividiyo yevidiyoutshintsho lwevidiyoIVivihiisitokhwe se vimeoibhodi emhlopheEhlabathini lonke
ICanLocalize: Affordable Guqula indawo yakho yoShishino ukuze ufikelele kubaphulaphuli abatsha
Iziphumo zoPhononongo: Baphendula Njani abathengisi kubhubhane kunye nokutshixwa kwezinto?
NgoJanuwari 9, 2014 ngo-12:02 PM
Enkosi ngokukhankanywa, Douglas! Kubulelwa kakhulu.
Aug 18, 2014 ngo-11:20 PM
Enkosi ngokubandakanya iMotionElements kolu luhlu lupheleleyo lweeNdawo zeMarike zeMedia.
Qiniseka ukuba undwendwela kwaye uzame i-VisualSearch entsha neluncedo ukufumana umxholo ngokukhawuleza.